पत्रकारलाई सम्मानको पाठ पढाउने प्रधानमन्त्री किन आफैले अरुको अपमान गर्छन ? – Saurahaonline.com
पत्रकारलाई सम्मानको पाठ पढाउने प्रधानमन्त्री किन आफैले अरुको अपमान गर्छन ?
काठमाडौं । पत्रकारलाई सम्मान र संस्कारको पाठ पढाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँग असहमतको विषयमा टिप्पणी गर्दा भने मर्यादाका सारा सीमा नाघ्दै आएका छन् । राजनीतिक प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, प्रोफेसर र बुद्धिजीवीहरू, लेखक तथा पत्रकारहरूलार्ई प्रधानमन्त्रीले अवहेलना गर्दै आएका छन् ।
पार्टीमा आबद्ध पत्रकारहरूलाई उनको भनाइ थियो, ‘तर, म फेरि भन्छु, सत्यमेव जयते । त्यस्ता खालको पीत पत्रकारिता आफैँ खेर जान्छ । किनभने पीत पत्रकारितासँग जुध्ने, पत्रकारिताको धर्म फलाउने, फुलाउने तपाईंहरूको जस्तो समूह पनि छ । जो, देश, जनता, लोकतन्त्र र सत्यको पक्षमा लड्छ ।’ नयाँ पत्रिका